Kulabo abalanda izindiza ezivela eRikooo futhi abalahlekile izici noma ukuthungwa
Umbuzo Kulabo abalanda izindiza ezivela eRikooo futhi abalahlekile izici noma ukuthungwa
izinyanga 11 4 Sekwedlule amaviki #995 by DRCW
Ngiye ngabona abantu abaningi abanezinkinga zokulanda kusuka kule sayithi, abangenayo imidwebo yezindiza, noma amathayili amnyama kumafayela we-photoreal evelele. Okokuqala ngivumele ngichaze kancane mayelana ne-FSX. I-Microsoft yaphuma ngezinguquko ezintathu ebhokisini lebhokisi. I-Standard FSX, i-FSX Deluxe, ne-Final FSX Gold Edition. Uma ungumnikazi we-Standard FSX noma i-Deluxe Editions futhi ungawabuyekezi, uzoba nezinkinga nezinye izindiza nemvelo. I-Microsoft iphuma ngamaphakheji wenkonzo ye-2 (SP1 & SP2) ngaphandle kwalezi zibuyekezo ezifakiwe, kuzoba nezinkinga. I-Auto Loader Rikooo inikeza imisebenzi kahle. Ngikunikeza ama-patches adingekayo ngezansi, ukukusiza ukuxazulula lezi zinkinga. Ngithemba ukuthi kuzosiza
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: i-tuncayboran40